सदैव श्रोताका पक्षमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २७, २०७६ पवन आचार्य
काठमाडौँ — नेपालमा रेडियो श्रोताको संख्या घट्दै गइरहेका बेला अमेरिकामा भने त्यस विपरीतको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । द नेल्सन कम्पनीले गत जुनमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा रेडियोमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकीको पहुँच रहेको देखिएको छ । टेलिभिजनको पहुँचमा ८६ प्रतिशत अमेरिकी रहेछन् । १८ वर्षमाथिका २४ करोड अमेरिकीले सबैभन्दा बढी रेडियो सुन्ने रहेछन्, जबकि सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउनेको संख्या १७ करोड ७८ लाख रहेको सोही तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सेयरकास्ट इनिसिएटिभले ४ हजार १ सय २९ जनामा गरेको ‘नेपाल मिडिया सर्वे, २०१९’ का अनुसार, ९१ प्रतिशत नेपालीले कम्तीमा एउटा मोबाइल सेट बोक्छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । हाल ८० लाखभन्दा बढी नेपालीको फेसबुक एकाउन्ट छ । ८८ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले फेसबुक चलाउँछन् भने ४५ प्रतिशतले मेसेन्जर ।
नेपालमा रेडियो श्रोताको संख्यामा कमी आउनुको प्रमुख कारण श्रोता चाहना र रेडियो सामग्रीबीच तालमेल नमिल्नु पनि हो । रेडियो सेट नभएकै कारण सुन्न नपाउनेहरूको संख्या पनि कम छैन । सेयरकास्टकै सर्वेक्षणले पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढीले रेडियो सेट नभएकाले रेडियो नसुन्ने गरेको देखाएको छ । रेडियो सेटबाट रेडियो सामग्री सुन्नेको संख्या ४८ प्रतिशत छ, जबकि मोबाइलबाट रेडियो सुन्नेहरू ५६ प्रतिशत छन् । पहिले रेडियो सुन्ने भए पनि अचेल छाडेका श्रोता ९ प्रतिशत छन् । रेडियो सञ्चालकहरूले अब श्रोता कतातिर छन् भन्ने बुझेर सोहीअनुसार आफ्ना सामग्रीलाई परिष्कृत र प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै रेडियोलाई सूचनाको स्रोत मान्नेको संख्यामा कमी आएको छैन । समाचार र सूचना सम्प्रेषणमा टेलिभिजनपछि सबैभन्दा विश्वसनीय रेडियो नै देखिएको छ । ३५ प्रतिशतले टेलिभिजनलाई विश्वास गर्छन् भने ३० प्रतिशतले रेडियोलाई । अनलाइन पोर्टलहरूलाई केवल २ प्रतिशतले विश्वास गर्ने गरेको तथ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । ३८ प्रतिशतले टेलिभिजनलाई सूचनाको स्रोत मान्ने गरेका छन् भने ३६ प्रतिशतले रेडियोलाई । रेडियोको पहुँच विकट क्षेत्रमा समेत रहेकाले पनि यो संख्या बढेको हो । रेडियोको पहुँच नपुगेको नेपाली भूभाग अब सायदै छ ।
श्रोताको विविधतासँगै रेडियो कार्यक्रममा पनि विविधीकरण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । विषयगत रूपमा रेडियोलाई एउटै स्वादमा केन्द्रित गर्ने परिपाटी हामीकहाँ अलि कम छ । तर, जतिले त्यसलाई अपनाएका छन्, उनीहरू बिस्तारै लोकप्रियताको शिखर चढ्दै छन् । मनोरञ्जन र हास्यव्यंग्य प्रस्तुत गर्ने रेडियो अडियो उपत्यकामा लोकप्रिय छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय गीत–संगीत मात्रै बजाउने रुस्लान एफएम रुचाइनेमै पर्छ । बाटाको अवास्थाबारे बुझ्न ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गर्ने एफएम सुन्नेको संख्या पनि बढ्दै छ । यसले देखाउँछ— श्रोताको चाहना समयसँगै परिवर्तन हुँदै गइरहेको मात्रै छैन, विषयविशेषमा उनीहरूको रुचि पनि उत्तिकै बढ्दो छ । पहिले जस्तो एउटै रेडियोबाट सूचना, मनोरञ्जन, व्यंग्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जानकारी खोज्ने श्रोता अचेल छैनन् भन्दा हुन्छ ।
श्रोताले पनि आफू वरपरकै समाचार बढी सुन्न चाहने सोही सर्वेक्षणले देखाएको छ । ६९ प्रतिशतभन्दा बढीले स्थानीय गतिविधि र समाचार मन पराउने रहेछन् । राष्ट्रिय महत्त्वका घटनामा २४ प्रतिशतको रुचि हुँदा ४८ प्रतिशतले गीत–संगीतमा चाख रहेको बताएका छन् । कृषिसम्बद्ध कार्यक्रममा ९ प्रतिशत अनि महिलाका मुद्दा र सवालमा ६ प्रतिशतको रुचि छ । तर, रेडियो समाचारमा सबैभन्दा बढी समेटिने र प्राथमिकता पाउने राजनीतिक घटनाक्रम र दलगत समाचारमा केवल ५ प्रतिशतले चासो प्रकट गर्ने रहेछन् ।
चुनाव र दैवी विपत्तिका बेला सबैभन्दा बढी प्रभावकारी रेडियो नै देखिएको छ । छिनछिनमा अपडेट गराइराख्ने र प्रयोगका हिसाबले पनि सजिलो भएकाले त्यस्तो समयमा रेडियोको प्रयोग र लोकप्रियता दुवै बढ्ने गरेको छ । तर, सुख–दु:ख, आपत्–विपत्मा साथीको भूमिका निर्वाह गर्ने रेडियोले आफूलाई सदैव त्यही रूपमा किन उभ्याउन सक्दैन ? विपत्का बेला आफ्ना घरपरिवारभन्दा श्रोतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने रेडियोकर्मीहरू अरू बेला त्यसै गरी किन खट्दैनन् ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ साथै हाम्रा रेडियोहरू कसरी र के उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेका छन् भनी थाहा पाउने बेला पनि भइसकेको छ ।
गाउँघरतिर बूढापाकाले नयाँ पुस्तालाई कथा सुनाइसकेपछि ‘सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला’ भन्दै बिट मार्थे । उति बेलादेखि नै श्रोतालाई कति महत्त्व दिइन्थ्यो भन्ने बुझ्न हामी सबै विगततर्फ फर्किए मात्रै पुग्छ । अचेल हाम्रा रेडियोहरू श्रोताकेन्द्रित कम र आत्मकेन्द्रित ज्यादा त भइरहेका छैनन् ? रेडियाकर्मीसँगै व्यवस्थापकहरूले समय घर्किनुअघि नै गहिरिएर सोच्ने बेला भएको छ ।
रेडियो कान्तिपुर पहुँचका हिसाबले रेडियो नेपालपछि दोस्रो हो । आफ्ना विविध प्रस्तुतिमार्फत यसले आफूलाई प्रमाणित गर्दै आइरहेकै छ । दूरदराजका र नसुनिएका कथा–व्यथालाई जस्ताको तस्तै सुनाउने, आशा र सम्भावनाका अनेक पाटा उजागर गर्दै लैजाने काममा पनि रेडियो कान्तिपुर सदैव सचेत छ । उपर्युक्त सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले रेडियो सुन्ने गरेका छन् तर उल्लेख्य श्रोता भएको त्यो भेगका समाचार र अन्य रेडियो सामग्री कति उत्पादन भए वा बजाइए त ? यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । सातै प्रदेशमा आफ्नो स्टेसन भएको रेडियो कान्तिपुर पनि अब श्रोताको चाहना बुझ्न उनीहरूकै माझ जाने समय भइसकेको छ ।
दु:खजति बिकाउ अर्थोक हुँदैन । साहित्यमा पनि आँसु बढी बिक्छ । पत्रकारितालाई हतारको साहित्य भनिन्छ, जहाँ पनि नकारात्मकताले बढी स्पेस पाइरहे जस्तो भान श्रोता, दर्शक र पाठकलाई पर्न थालेको छ । रेडियो तरङ्गमार्फत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहका लागि प्रेरणादायी प्रसङ्ग, सन्दर्भ र व्यक्तिलाई प्रस्तुत गरेर समाज रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने यत्नमा रेडियो कान्तिपुर आगामी दिनमा अझ सशक्त भएर लाग्नेछ किनभने रेडियो कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेताको प्रभावमा पर्दैनन् भन्नेमा ८५ प्रतिशत श्रोता विश्वस्त छन् ।
श्रोताको यही अविचलित स्नेह र प्रेमलाई जीवन्त राख्ने क्रममा रेडियो कान्तिपुरले आफूलाई सदैव तटस्थ उभ्याएको छ । जुनसुकै घटनाक्रम र परिवेशमा पनि हाम्रो स्थान भनेको श्रोतापट्टि नै हो । कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति वा संस्थाको पक्ष वा विपक्षमा उभिनेभन्दा पनि सन्तुलित र तटस्थ हुने यत्नलाई नै हामीले सर्वोपरि ठान्यौं, ठानिरहनेछौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गरेका समाचार र सूचनालाई आधार मानेर नेपाल प्रेस काउन्सिलले गरेको मिडिया अनुगमनमा पनि रेडियो कान्तिपुर अब्बल साबित भयो । यो सन्तुलित समाचार र तटस्थ विचार दिने रेडियो बन्नुमा पछाडि श्रोताको मार्गदर्शनले पनि भरपुर भरथेग गर्‍यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
श्रोताका यिनै चाहनाको विविधतालाई दुई दशकदेखि सम्बोधन गर्दै आएको रेडियो कान्तिपुरले आगामी दिनमा आफ्ना सामग्रीलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने देखिएको छ किनभने कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि २० वर्ष भनेको निकै लामो समय हो । आफूलाई परिपक्व पार्दै सूचना र मनोरञ्जनको दुनियाँमा नयाँ मानक स्थापित गर्नका लागि व्यावसायिक एफएमहरूमाझ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह पनि रेडियो कान्तिपुरले नै गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यावसायिक रेडियो प्रसारणको इतिहास रेडियो कान्तिपुरसँगै जोडिएकाले यो जिम्मेवारीलाई बोक्ने अभिभारा पनि यसकै काँधमा छ । पछिल्ला दुई दशकमा रेडियो कान्तिपुरले यसका लागि देखाएको अग्रसरता सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
कार्यक्रममा विविधता, सूचना सङ्कलनदेखि प्रसारणसम्म गुणस्तरीयता र प्रविधिमा नयाँपन खोज्न जरुरी भइसकेको छ । साथै संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई बलियो पार्दै लैजाने क्रममा स्थानीय समाचार र विषयलाई मूलधारमा स्थापित गराउनु र भाषिक, क्षेत्रीय र जातीय विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्नु समयको माग हो ।
प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:५०
मंसिर २७, २०७६ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
दस दिनसम्म चलेको दक्षिण एसियाली खेलकुदको १३ औं संस्करण मंगलबार साँझ भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली खेलाडीहरूलाई बालुवाटारमा निम्त्याएर प्रशंसनीय प्रदर्शनका लागि बधाई दिए र प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गरे । नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै र आफ्ना पछिल्ला समस्त रेकर्ड तोड्दै ५१ स्वर्ण पदकमाथि अधिकार स्थापित गरे । उनीहरू सर्वत्र प्रशंसित भए । दक्षिण एसियालीमाझ गर्वले नेपालीहरूको छाती अरू चौडा भयो ।
नेपालले अपेक्षाकृत सहजतापूर्वक बृहत् महत्त्वको कार्यक्रम आयोजन गर्न सक्दैन भनेर धेरैले नपत्याइरहेको अवस्थामा यस्तो क्षेत्रीय महत्त्वको खेलकुद काठमाडौंको साँघुरोमा सम्पन्न गर्नु आयोजकका हकमा निश्चय नै प्रशंसनीय कार्य हो । हो, आयोजनाका दृष्टिले कमी–कमजोरी नभएका होइनन्, भए । तयारी पर्याप्त नभएको र कतिपय प्रबन्धनमा आँखा नपुगेकै हो । जस्तै— सुटिङ प्रतियोगितामा खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धीहरूसँग बन्दुक माग्नुपरेको थियो । हामीकहाँ भइहाल्छ नि, गरिहालिन्छ भन्ने परम्परागत प्रवृत्ति अलि बढी नै छ । यस्तो प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म कमी–कमजोरीलाई न्यूनतममा झार्न मुस्किलै हुन्छ । यसो भनिरहँदा तर कार्यक्रम प्रशंसनीय रूपमा सम्पन्न गरेको होइन भन्ने अर्थ नलागोस्, त्यस्तो किमार्थ होइन । खेललाई काठमाडौंमा सीमित नराखेर पोखरा र जनकपुरसम्म फैलाउनु थप प्रशंसाको विषय हो ।
क्षेत्रीय दृष्टिले नेपालीहरू राम्रा खेल प्रदर्शक हुन् र खेलाडीहरूलाई तज्जन्य सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराइयो भने यसमा अझ प्रगतिका प्रचुर सम्भावना छन् । यस पालिको खेलकुद आयोजनले यस विषयलाई राम्ररीप्रस्ट्याएको छ । गर्दा, गर्न चाहँदा गर्न सकिन्छ । अझ उन्नत गर्दै जान सकिन्छ । तर यो आयोजनको एउटा पाटो मात्रै हो । यस आलेखमा तर म खेल समीक्षा गर्न गइरहेको छैनÙ साँघुरो सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना गरिँदा सहरवासीमाथि पर्ने सकस, सामान्यजनले बेहोरेका सास्ती र काठमाडौंको अव्यवस्थाबीच आयोजकका समस्याबारे चर्चा गर्न लागिरहेको छु ।
हुन त तर्क हुन सक्छ— यति महत्त्वपूर्ण आयोजन हुँदा सकस हुनु स्वाभाविकै हो । देशको प्रतिष्ठाका विषयमा सहरवासीहरू र सहर भित्रिने–बाहिरिनेले अलिअलि सास्ती पनि सहनुपर्छ । यस्तो तर्कमा चाहिँं वास्तवमा जे छ ठीकै छ, अरू उन्नत विकल्पबारे सोच्नुपर्दैन, जेजसरी गरियो महान् काम गरियो भन्ने मनसाय हुन्छ । सकस बेहोर्नु र सास्तीप्रति कुनै गुनासो नगर्नु भनिरहँदा कामहरू तदर्थ हिसाबले भइरहून्, परेका बेला बेहोरौंला भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । यस्तो सोच प्रगतिबाधक हो । यसो भन्नु भनेको ‘कुनै–कुनै बूढापाकाले हाम्रा पालामा कस्ता–कस्ता दु:खसास्ती बेहोर्‍यौं, तिमीहरू यति पनि नसहने ?’ भनेजस्तै हो । हरेक पुस्ताले दु:खै पाउनुपर्छ, सकस र सास्ती बेहोरिरहनुपर्छ भन्नु परपीडक मानसिकता हो ।
यस पालिका खेलकुदको प्रसंग मात्र होइन, हरेक ठूला इभेन्टमा काठमाडौंको साँघुरोका कारण जनमानसमा आयोजनप्रति अपेक्षित उत्साह हुँदैन । कताकता खल्लो हुन्छ, यतै बाधा उतै बाधा ! आवागमनमा अवरोध त सामान्यजस्तै हुन्छ । अवसर खुसीको हुन्छ, तर कहिले वाहनमा जोरबिजोर, कहिले भने बाटो पूरै खाली गर्नैपर्ने । कुनै विशेष महत्त्वको आयोजन हुँदा बाटो छेक्दै राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ चल्नैपर्ने ! क्या गजब छ भने, राष्ट्रपति त जनताका हुन् तर उनको यात्रालाई राजा–महाराजका सवारीको झलक दिनैपर्ने ! कि हेलिकप्टरमा उडाउनुपर्ने, नभए यात्रा होइन, बाटै ओगटेर सवारी चलाउनुपर्ने ! यतिका आलोचना भइरहँदा पनि नसच्चिएपछि वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएर अर्को राष्ट्रपति आउँदासमेत उही महाराजाधिराजवाला परम्परालाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने विषयमा अब शंका नगरौं ।
यहाँ शानशौकतको मामिलामा राज्यसञ्चालनको अधिकार पाउनेहरू सच्चिऊन् भनी कामना गर्नु व्यर्थ प्रतीत हुन थालेको छ । आफै खटन गर्न पाएको, किन छोड्ने भन्ने मानसिकता बनिसकेपछि त्यसो नगर्नु, सुहाउँदैन भनेर सद्सल्लाह दिने नै उल्टै अर्घेलो हुन्छ । जति भने पनि, सत्ताको छाला यति बाक्लिइसकेको छ, छुँदै छुँदैन । जम्माजम्मी ५१ वर्ग किलोमिटरको उपत्यका र यसैमा सवारी चलाउनुपरेको, सबै थोक कोचाकोच अटाउनुपरेको छ । बढ्दो जनसंख्याका साथै देशका विभिन्न भागबाट आउनेलाई अन्ततोगत्वा यहीँ घर बनाउनुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा ढोकै सडकमा खुल्ने घरहरू छन् । सडक साँच्चै स्तरीय, फराकिला बनाउन विस्तार गर्नुपर्छ, तर विस्तार कहाँ गर्नु ! जताततै अव्यवस्थित बसोबास, मुआब्जा दिँदैमा ढुकुटी रित्तिने अवस्था छ ।
कुनै बृहत् महत्त्वको कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने, विशष्टि पाहुना निम्त्याउनुपर्‍यो भने कतै टाल्दै, कतै छोप्दै हिँड्नुपरेको छ । बाहिरबाट आउने विशिष्टलाई त सुन्दरता पोतेरै भए पनि देखाउनैपर्‍यो । त्यति मात्र कहाँ हो र, देशभित्रकै विशिष्टहरूले पनि आफ्नो तामझामका लागि साँघुरा सडकमाथि नै आँखा गाडेका हुन्छन् !
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा होओस्, भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा होओस् कि सार्क र बिमस्टेकको आयोजन हुँदा, काठमाडौं त बिचरा अस्तव्यस्त नै बन्छ । जनताको गाली खाइरहन्छ । ‘काँ–काँ’ र ‘कुँ–कुँ’ गर्दै विशिष्टका गाडी दौडिन्छन् । प्रहरीको दादागिरी फेरि उत्तिकै । शासनमा पुगेका आफ्नै मान्छे जनतालाई मान्छे नमानेर वस्तुसरह व्यवहार गर्छन् । त्यसमाथि त्यसै पनि कति अव्यवस्थित बसोबास छ राजधानीको, यो आफैंमा झन् ‘दर्शनीय’ छ ! आवासीय क्षेत्र भनिएका ठाउँमा समेत जतासुकै सटरैसटर छन् । मछली (माछा) बजार हो कि आवासीय क्षेत्र, छुट्याउनै गाह्रो । मूल सडकमै हेर्नुहोस्, कतै ‘जाम’ पर्‍यो कि फुटपाथमा पैदलयात्री हिँड्ने हो कि मोटरसाइकल चढ्ने हो, अलमलै हुन्छ । कहिलेकाहीँ त गाडी नै फुटपाथमा उक्लिन्छन् । निर्माण सामग्री असरल्ल छरिएका, खाल्डा नपुरिएका सडकहरू, धूलो र धूवाँले मन पराएको काठमाडौंमा महानगर प्रशासनका कार्यालय नै चारतिर छरिएका छन् । त्यसै साँघुरो, त्यसमाथि व्यवस्थापनका दृष्टिले अनाथजस्तो यो सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गर्ने आँट गर्नु नै आफैमा ठूलो दुस्साहस हो ।
कुनै विशेष महत्त्वको कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो कि इज्जत धान्नै मुस्किल । तीनकुनेमा नक्कली फूलबारी बनाए जस्तै कता सिँगार्नु कता छोड्नु ! फाटेको सिरकलाई कम्बलले छोपेजस्तै सधैं यसरी कसरी सक्नु ? हुन त धेरैअघि नै, २०४० को दशकमै योजनाविद् हर्क गुरुङले काठमाडौं राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान होइन भनेका थिए । तर पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि आजसम्म यो उपत्यकाको आकर्षण यस्तो छ कि जस्तै होओस्, जे परोस्, यहीं नकोचिई नेपाली ‘दिल’ मान्दै मान्दैन । स्वयम्भू उक्लेर हेर्नुहोस्, सर्लक्कै उपत्यकामा विरलै खाली ठाउँ देखिन्छ । सहरबीचको टुँडिखेल पनि मिचिँदा–मिचिँदै नाम नै फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने, काठमाडौं आफूले धान्नै नसक्ने संरचनाहरूको भार सहेर बसेको छ । भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद् आइपर्दा अब खाली ठाउँका लागि ढलेका संरचनाकै आड लाग्नुपर्ने जस्तो अवस्था बन्दै गएको छ ।
निश्चय नै विशेष महत्त्वका कार्यक्रम आयोजन गर्नु खुसीको विषय हो । विशिष्ट पाहुना पनि निम्त्याउनैपर्छ । त्यसका लागि ठाउँ पनि फराकिलो चाहिन्छ । आयोजन सम्पन्न गरिसकेपछि फुर्किनु, फुर्क्याउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर सधैं कठिनाइपूर्वक नै गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । मानिसले थप सास्ती नबेहोरी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनुपर्छ । यसका लागि सहरको पुनर्व्यवस्थापनका साथै उपत्यकाबाहिर उपसहर (सेटेलाइट टाउन) हरूको योजनाबद्ध विकास हुनुपर्छ । उपसहरहरूको योजनाबद्ध विकासका लागि साँखु, नुवाकोट, बनेपा–धुलिखेल उपलब्ध विकल्प हुन् । तर त्यहीँ पनि जेजसरी अव्यस्थित विस्तार भइरहेको छ, योजनासहित अविलम्ब हस्तक्षेप गरिएन भने केही वर्षपछि त्यहीँसमेत सम्हालिनसक्नु हुन सक्छ ।
आजको जमानामा मुख्य विषय ‘कनेक्टिभिटी’ होÙ उपसहरहरूको योजनाबद्ध विकास र तिनलाई मुख्य सहरसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस हाइवे) हरूको निर्माण हो । बढ्दो ट्राफिक जामका कारण चोकहरूमा ‘अन्डरपास’ आवश्यक भइसकेका छन् । मेट्रो रेल आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भइसक्यो । भन्सारबापतको राजस्व बटुल्नका लागि गाडी थप्दै जाने तर सडक फराकिला बनाउने ठाउँ आकाश मात्रै रहने अवस्था बनिरहेको परिदृश्यतर्फ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ध्यान जानु आवश्यक छ । सहरमा गाडी थुपारेर मात्र हुँदैन, तिनलाई गुड्न सडक चाहिन्छ, पार्किङ चाहिन्छ ।
सहरी विकास र विस्तार मात्र होइन, यसको अद्यावधिक व्यवस्थापन भइरहनुपर्छ, उपसहरहरूको योजनाबद्ध विस्तार र विकास हुनुपर्छ । त्यसपछि बृहत् महत्त्वका कार्यक्रम आयोजन गर्न अतिरिक्त तत्परता भए पुग्छ । कार्यक्रम आयोजन गरिसकेपछि आफूआफै फुर्किराख्नुपर्दैन, अरूले नै प्रशंसा गर्नेछन् । खेलका लागि मात्र होइन, एसिया स्तरका अरू इभेन्ट आयोजन गर्नसमेत स्थान उपलब्ध गराउन सकिनेछ । नेपालमा स्थान छ, संरचना छन्, वातावरण इभेन्टमैत्री छ भनेर प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । प्रचार गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम, यो साँघुरो काठमाडौंबाहिर, यसका आसपासका स्थानमा उपसहरहरू निर्माण गरेर फराकिलो बनाउनुपर्नेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:४८